Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Umntu omnye oswelekileyo, uninzi lwalahleka kwintlekele yamaphenyane amabini eIndiya
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Amashumi amaninzi abantu abalahlekileyo emva kwengozi ezimbini zokukhwela iphenyane eMajuli, e-India.
Iinqanawa ezimbini zabakhweli zangqubana ngqo eIndiya.
Isikhephe esincinci esincinci sikhwela e-India ukungqubana.
Ubuncinci umkhweli obulewe kwintlekele.
Iiferi ezimbini ezigcwele abantu abakhweleyo ezihamba kumacala ahlukeneyo ziye zangqubana nomlambo iBrahmaputra kumantla esixeko saseJorhat, ebekwe kumantla mpuma e-Assam, e-India.
Kuxelwe ukuba bekukho abantu abangaphezulu kwekhulu kwizikhephe, uninzi lwabo lusadukile kwaye boyika ukubhubha.
Imifanekiso ejikeleza kwi-Intanethi ibonisa isikhephe esikhulu, esinzima, esasithwala abakhweli kunye nenani lezithuthi, sityumza isikhephe esincinci sabakhweli.
Incinci ferry ikhutshwe kwangoko emva kwengozi, ihamba phantsi kwamanzi kwimizuzwana yengozi, ividiyo ephazamisayo ekubonakala ukuba yadutyulwa ngumgibeli kwimiboniso enkulu yesikhephe. Abantu bagxalathelana ukuphuma kwisitya esitshonayo, impahla yabo idada.
Akukho lwazi malunga nexhoba elinokubakho lalifumaneka kwangoko.
Iiferi zisetyenziswa ngokubanzi kwezothutho Indiya . Iingozi zamaphenyane ziqhelekile ngenxa yokuxinana kwabantu rhoqo kunye nolondolozo olubi kunye nemigangatho yokhuseleko.